Obstacle in relation between Material and Casual bodies – www.kamalsfabulous.com/ibook
स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धमा हुन सक्ने बाधाहरु
(Obstacle in relation between Material and Casual bodies)
लिँग शरीरले स्थुल शरीरलाई एक साधन र औजारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । जस्तै मानौँ कि घरको छतमा रहेको पानीको ट्याङ्किमा पानी तान्न भनेर जोडेको मोटर छ । त्यस मोटरले पानी ताने घरको ट्याङ्किमा पानी चढ्यो र घरमा सुविधा भयो, मोटरले काम नगरे ट्याङ्किमा पानी नचढ्ने र घरमा सुविधा नहुने हुन्छ । मोटर बिग्रन गएमा अर्को मोटरको व्यवस्था गरी जोड्ने गरिन्छ । अथवा एउटा मोटर अर्काको घरमा पानी तान्न पनि प्रयोग गरिन्छ कहिले कहीँ । यस्तै विधि र तरिका लिँग शरीरले गरिरहेको हुन्छ ।
बिजुलीको तारमा लाइन जोडेर विभिन्न उपकरणहरु पँखा, मोटर, बत्ती बाल्ने र त्यस उपकरणबाट सुख सुविधा लिने गरेको कुरा त हामी सबैलार्इ थाहा छ । लिँग शरीर र स्थुल शरीरको सम्बन्धमा उल्टो तरिकाकाे प्रयोग भएको हुन्छ । सबै मानिसले, अन्य विज्ञानका ज्ञाता, चिकित्सकहरुले बुझ्नु पर्ने यो अति महत्वपूर्ण अवस्था हो । उपकरण चलाउनलाई त्यस उपकरणलार्इ बिजुलीकाे लाइनमा लगेर जाेडिन्छ । तर स्थुल शरीरकाे उपकरणलाई लिँग शरीरकाे लाइनमा लगेर नजोडेर, लिँग शरीरले आफै स्थुल शरीरकाे उपकरणमा आई आफ्नो लाइन जोडि चलाएर भोग गर्दछन् । ती पँखा, मोटरहरुलाई कुन लाइनमा कस्ले लगेर जोड्नेसँग मतलब हुँदैन । ती उपकरणहरू जुन लाइन, जस्ले जोडे पनि चलि दिन्छन र आफुले भोग लिदैनन् । जापानमा बनेको टिभी जुन देशमा किनेर लगेर चलाए पनि चल्दछ र त्यसै देश अनुसारको सुख भोग दिन्छ भने जस्तै गरेर स्थुल शरीरले पनि जुन लिँग शरीर आएर उर्जा र चेतना दिए पनि काम गर्न थाल्दछ । अरु बढी जानकारी लिँग शरीरले कसरी काम गर्दछ भनेर केमिकल रियाक्सन(Chemical reaction) सहितको कारण दिन त म सक्दिन । ती कारणहरू मलाइ नै थाहा छैन । तर त्यस्ता कार्यहरु हुने गर्दछन् भन्ने कुराका प्रमाणहरु प्रशस्त छन् । जसरी लिँग शरीरले आफ्नो उर्जा र चेतनाको कारण स्थुल शरीरलार्इ संचालन गरेको हुन्छ भने त्यस्तै समान चेतना भएका अन्य लिँग शरीरहरुले पनि अर्काको स्थुल शरीरमा प्रवेश गरेर संचालन गरिरहेको हुन्छ र अाफुले भाेग गर्दछन् ।
जसरी कुनै पँखा, मोटरहरु यदि जतन नगरी खुला राखेको भए त्यहाँ आई अरुले आफ्नो लाइन जोडि चलाएर भोग गर्न सक्दछन् । साँचाे नलगाइ राखेकाे साइकलहरूले चलाउन सक्दछन् भन्ने उदाहरण धेरैलाई थाहा छ । त्यसो गर्दा एउटा स्थुल शरीरकाे अरू अरू लिँग शरीरले पनि भाेग गर्ने गर्दा भोग बाँडिन जान्छ । एउटाले चोरेर भोग गरेको देखेर अरुले पनि त्यसै गर्ने गर्दछन् । त्यसरी आफ्नो साधन कहिले कहीँ अज्ञानताका कारण अरुको चोरेर खाने ठाउँ भएको हुन सक्दछ । त्यसरी बेवारिस उपकरण सबैले चलाए भने कति दिन टिक्ला ? यस्तै हालत कहिले कहीँ मानिसको भएको हुन्छ । यस्तो अवस्था आउदा मानिसको शरीरको के हाल भयो होला ?
यो भनेको स्पष्ट र अलि बुझिने शब्दमा भन्दा मानिसको शरीरमा अन्य लिँग शरीरहरुको लुकेर प्रवेश भइ त्यसबाट हुन आएको आनन्द वा अन्य भोगहरु ती लुकेर आएर बसेका लिँग शरीरहरुले पनि भोगिरहेका हुन्छन् । त्यसरी अन्य लिँग शरीरको प्रवेश भएको छ भने मानिसलार्इ विभिन्न असुविधाहरु भएका हुन्छन्, विभिन्न लक्षण वा रोगहरुको लक्षणहरु देखिन आउँछन् । यिनै अवस्थाहरुको समयमा नै मुल्याङ्कक, हेरचार, उचित उपाय, उचित उपचार हुन नपाएमा अकाल मृत्युको कारण हुन सक्दछ ।
यस्तो गरेर अरु लिँग शरीरले चोरी गरेर शरीरमा प्रवेश गर्ने र चलाउने मौका कसरी भयो त ?
यस्तो अवस्था मानिसमा आफ्नो हेलचक्रयाँइको कारण हुन आएको हुन्छ । मानिसले आफैले आफ्नो स्थुल शरीरमा अरु लिँग शरीरलार्इ प्रवेश गर्ने मोैका दिएको हुन्छ । अन्य लिँग शरीरले जानेर, कुनै जुक्ति गरेर अरुको स्थुल शरीरमा प्रवेश गर्ने क्षमता प्राप्त गरेको होइन । स्थुल शरीर र आफ्नो लिँग शरीरको बिचमा जे जसरी सम्पर्क हुने गरेको थियो त्यसै तरिका र कारण अन्य लिँग शरीरले प्रवेश गरेको हो । आफ्नो लिँग शरीरले आफ्नो चेतना र उर्जाको कारण स्थुल शरीरसँग सम्पर्क स्थापना गरेर संचालन गरेको हुन्छ । अन्य लिँग शरीर जसको चेतनाको स्तर स्थुल शरीरको आफ्नो लिँग शरीरसँग नजिक हुन आउछ त्यहाँ उसले प्रवेश गर्न सक्दछ जस्तैः पितृ, देवी देवता, अन्य नजिकका लिँग शरीरहरु । यदि मानिसको स्थुल शरीरमा कुनै एक पटक अन्य लिँग शरीरले प्रवेश गरेको छ भने पटकपटक अन्य अन्य लिँग शरीरहरुले पनि प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यदि मानिसलाई अन्य लिँग शरीरको बारेमा पटक्कै ज्ञान छैन, विश्वास गर्दैन भने त्यसको शरीरमा अन्य लिँग शरीर प्रवेश गर्ने र चुहावट गरी अरुले भोग गर्ने सम्भावना कम रहन्छ । जस्तै मानिसले भुत, प्रेत, बोक्सी, पितृ, देवी देवता, धर्म, धार्मिक संस्कारहरुमा विश्वास गर्दैन, मन्दिर, मश्जित ,चर्च, गुम्बा वा अन्य त्यस्ता चर्चा हुने ठाउँहरुमा धाउदैन र तिनीहरुको बारेमा चर्चा, टिका टिप्पणीहरु गर्दैन, केवल आफ्नो कार्यमा मात्र व्यस्त रहन्छ भने उसको शरीरमा अन्य लिग शरीरको प्रवेश हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ । यसको मतलव ती माथि उल्लेख गरिएका जीवहरु छैनन् भन्ने होइन तर तिनीहरुको प्रवेश गर्ने कारण कम हुन्छ । जब मानिसले आफ्नो जीवनमा ती भुत, प्रेत, बोक्सी, पितृ, देवी देवता, अन्य लिँग शरीरको बारेमा चर्चा गर्ने गरेको छ, मन्दिर, मश्जित, चर्च, गुम्बा धाउने गरेको छ, आफ्नो आफ्नो धार्मिक संस्कार अनुसारको संस्कारहरुमा भाग लिने गरेको छ भने तिनीहरुमा ती अन्य लिँग शरीरहरुको प्रवेश हुने सम्भावना बढी रहन्छ । मानिसहरु आफ्नो आफ्नो सम्प्रदाय अनुसार कुरा स्पष्ट नबुझिकन पनि भुत, प्रेत, बोक्सी, पितृ, देवी देवतासँग सम्पर्क गर्न चाहने वा सम्पर्क गरेको, कुनै एक पटक सम्पर्क भएको या सम्पर्क गर्ने इच्छा र कोसिस गरेको, सुनेको, सुनेर विश्वास गरेको, मन पराएकाे वा डराएको अनुभव गरेको छ भने उस्को शरीरमा अन्य लिँग शरीरको प्रवेश गर्ने सम्भावना बढी हुन्छन । जो मानिसहरुले प्रायः आत्मा भन्ने शब्दहरु पटकपटक उच्चारण गर्ने, चर्चा गर्ने गरेका हुन्छन् ती मानिसहरुमा ती अन्य लिँग शरीरले प्रवेश गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । कतिपय मानिसहरु जसले त्यस्ता अन्य लिँग शरीरको वा भुत, प्रेत, बोक्सी, पितृ आदिको प्रकोपबाट अरुलार्इ बचाउने विभिन्न विधि उपायहरु अपनाउने, अरुलार्इ सिकाउने, अरुको उपचार गरिदिने गरेका हुन्छन्, तिनीहरुमा अवश्य ती अन्य लिँग शरीरहरुको प्रवेश पटकपटक हुने गरेको हुन्छ । त्यसैले यिनै लिँग शरीरका बारेमा अल्प ज्ञानहुनु र अनावश्यक चर्चा गर्नु, अल्प समाचार कोट्याउनु, अल्प अर्थ लगाउनु, अल्प सम्पर्क गर्नु, अपुर्ण उपायहरु अपनाउनु नै मानिसको अन्य दुष्ट लिँग शरीरहरुसँगको सम्पर्कमा आउने कारण र कतिपय कष्टका कारण बनेको हुन्छ । हरेक मानिसले आफ्नो बयस्क जीवन सम्ममा जान अन्जानमा पटकपटक यस्ता लिँग शरीरको चर्चा र सम्पर्कहरु गर्ने अवसर पाई सकेको हुन्छ । कति त अझ खोजी खोजी त्यस्ता अवसरहरु खोज्ने गरेका हुन्छन् । जस्तैः म लेखक पनि यस्तै अल्प ज्ञानको कारण भुत, प्रेत, बोक्सी, पितृ, देवी देवताहरुका बारेमा पटकपटक चर्चा गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने गरेको थिएँ । तिनीहरु सत्य हुन वा होइनन्, तिनीहरु वैज्ञानिकहरुले भने जस्तै रुढिवादी बिचारमात्र हुने कि केही सत्यता पनि छ भन्ने जिज्ञासा बोकेर हिडेको थिएँ र यिनै कुराहरुको सुराक कतै भेटिन्छ कि भन्दै आफुले पढ्ने गरेका किताबहरुमा खोज्ने गर्दथेँ । केही पटक पुर्ण अर्थ नलाग्ने गरेर त्यस्ता चिजहरुको सम्पर्कमा आएको थिएँ ।
हरेक मानिसले कुनै न कुनै धर्मसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै धार्मिक संस्कारमा उपस्थित, सहभागी भएका हुन्छन् । विभिन्न पुजा, टिका, फुल, प्रसादका अवसरहरु पाएका हुन्छन् । धर्मका विभिन्न प्रचलनहरुले हामी भगवानको नजिक पुग्ने इच्छा राख्दै खोलेको ढोका र झ्याल भगवानको आराधना पछि बन्द गर्न जान्नु पर्छ भन्ने थाहा थिएन र ती झ्याल र ढोका सबैका लागि र सधैँका लागि खुला छोडेका हुन्छौँ । मानिसले आफ्नो जीवनमा गर्ने गरेका, अल्प ज्ञानका विभिन्न संस्कार, जप, ध्यान, चर्चाहरुले नै अन्य लिँग शरीरलाई आफ्नो शरीरमा प्रवेश गराउने बाटो आफैले बनाएका हुँदारहेछौँ । त्यसो गर्दा शरीरमा नबोलाइकन आफै आएका आगन्तुक अन्य लिँग शरीरहरुले हामीले गर्ने काममा सहभागि हुन खोज्दा रहेछन् र जीवनमा विभिन्न समस्याहरु पैदा भएका हुँदा रहेछन् । जस्तै कि आफ्नो गाडीमा अरुले तेल हालेर चलाउने वा आफुले चलाएको गाडीमा अरुले स्टेरिङ्ग घुमाइदिने, ब्रेक थिचि दिने गरेका जस्तो हुन्छ । मानिसको जीवन यी कुराहरु बुझ्न नसकेर अस्त व्यस्त भएको हुन्छ ।
त्यस्को उपचार र उपाय के छ त ?
यसरी विभिन्न कारणवस अन्य लिँग शरीर छन् भन्ने अल्प ज्ञान भएको वा भुत, प्रेत,बोक्सी, पितृ, देवी देवताहरु छन् कि छैनन् भनेर मनमा शङ्का उत्पन्न भएको छ, पुर्ण कुरा नबुझे पनि तिनीहरुको सम्पर्कमा आएको अनुभव छ भने यस्तो परिस्थितिमा आइसकेको वा एक पटक सम्पर्कमा आइसकेकाहरुको त्यस्ता सम्पर्कहरुबाट पूर्णरुपमा तर्केर बस्न सक्ने वा केही थाहा नपाए जस्तो गरेर भुलेर बस्न सक्ने वा आफ्नै पुरानो अवस्थाको जीवनमा फर्कने कुनै कुनै उपाय हुँदैन । उ अब घाइते भइ सकेको हुन्छ र त्यो कुराले उसलाई जीवनभर चाहेर नचाहेर पिछा गरिरहेको हुन्छ । जस्तैः कुनै किताब, उपन्यास, खबर, समाचार पढेर, सुनेर वा बिचैमा छोडर अब अरु पढ्दिन सुन्दिन र पढेको सुनेको जति भुलि दिन्छु भन्दैमा भुल्न सकिदैन । कोही मानिसले म भुल्न सक्दछु जानेको कुराहरू भन्लान् । कोहीकोही मान्छेको जति पढे पनि नबुझ्ने खुबी हुन्छ, तिनले कुनै कुरा बुझेँ भनेका रहेछन भने पनि त्यो कुराको गहिराइमा नबुझेको भएर तिनीहरुले भुल्न सक्दछ । तर यदि बुझ्ने मान्छेले कुनै कुरा स्पष्ट बुझेकोछ भने अब आफ्नै इच्छाले ती कुरालाई दिमागबाट मेट्न सक्ने खुबि मानिसमा छैन । मानिसको जीवनमा यो ठुलो असुविधा हो रहेछ । यति एउटा खुबि म मा भएको भए मेरो जीवन धेरै सुखमय हुन्थ्यो होला । मेरो जीवनलाई आखिरमा तिनै चाहेर पनि भुल्न नसक्ने कुराहरुले, जीज्ञासाहरुले, अनुभवहरुले, प्रश्नहरुले पिछा गर्दैै मलाई डोहर्यायो ।
त्यसैले यदि कोही मानिस यस्ता लिँग शरीरको सम्पर्क, सङ्गत, लेनदेन, पुजा, ध्यान, इच्छा भइसकेको छ, तिनको बारेमा पढेर केही बुझेर चर्चा गरेको छ भने अब ती व्यक्तीहरुको यतिकैमा केही थाहा नपाए जस्तो गरेर पुरानो अवस्थामा फर्कने उपाय हुँदैन । यो सम्पर्कका कुरा उसकाे चेतनामा गएर बसेको सम्पर्क हो । कुनै खरिद गरेर ल्याएको सामान मन नपरेर फर्काए जस्तो होइन । हाम्रो चेतनामा हामीले मेट्न सक्दैनौँ र त्यस चेतनाले सँधै, सबै तिर पिछा गरिरहेको हुन्छ । झन जीवनभर पटकपटक यस्ता अन्जानमा सम्पर्क भइराख्नेछन् । त्यसबाट हुन आउने नराम्रा असर, समस्या, जीवनको नै त्रास र खतराको अवस्थाबाट पटकपटक आइरहने छ । तर यसबाट बच्ने अझै एक उपाय बाँकी रहेछ वा हुन्छ । त्यो उपाय अति कठिन हुन्छ । जीवनमा अब त्यो भन्दा अरुकुनै उपाय बाँकी रहेको हुँदैन ।
त्यो उपाय के हो त ?
यो उपाय कुनै तन्त्र मन्त्र, जन्तर, पुजाहरु होइनन् । झन ती विधिहरु अपुर्ण विधिहरू हुन् र ती विधिहरुले नै हामीलाई त्यस्ता अज्ञात अदृश्य भुत, प्रेत, बोक्सी, पितृ, देवी देवता सम्पर्कमा पटकपटक पुर्याउदो रहेछ । त्यो अन्तिम र पूर्ण उपाय हो अब सावधानीका साथ अझ अगाडि बढेर, त्यस अदृश्य संसारका र त्यहाका जीवहरुका कुराका बारेमा पुरा, सम्पूर्ण अध्ययन गरेर, पुर्ण रुपमा बुझेर, त्यसबाट पैदा हुने भय, त्रास, खतराकाे कारण र त्यसको सही उपायका बारेमा बुझेर, ती बुझेका कुराहरूबाट अति आवश्यक केही चिजहरु आफ्नो लागि प्रयोग गरेर, महत्वपूर्ण ज्ञानहरूलाई साँचेर राखेर अरु अनावश्यक भय र त्रासका कारणका विषयहरुलाई सधैँ नकोट्याइकन दिमागको कतै कुनामा सँगालेर थन्काएर राख्नु पर्दछ । अब अध्ययनपछि त्यस अदृश्य संसारको बारेमा स्पष्ट जानिएको छ तर तिनीहरुको बारेमा चर्चा कहिल्यै गर्नु हुँदैन वा भुले जस्तो गर्नु पर्दछ । यदि कोही मानिस आफुभन्दा त्यस बारेमा बढी जानेको जस्तो लाग्यो भने तिनीहरुसँग अलि अलि चर्चा गरेर सहायताको अपेक्षा, थप जानकारी लिने उद्देश्य राखे पनि बढी चर्चा नगर्ने गर्नु पर्दछ । यो मात्र ती अदृश्य संसारका त्रासबाट बच्ने पूर्ण उपाय हो । तिनीहरुको चर्चा नै नगरिकन, सम्पर्कका कुनै माध्यम नै नराखिकन बस्न सक्नु मात्र उत्तम उपाय हो । जुन आजसम्म मानिसहरुले लामा, झाँक्री, पुजारी, पुजाहरूले पूजा, झारफुकफ जन्तर, मन्तरहरु जस्ता अपनाइ आएका अरु सबै उपायहरु अपूर्ण र क्षणिक हुन् । यस बारेमा पूर्ण ज्ञान नभएकाहरु लामा, झाँक्री, पुजारी, पुजा, जन्तर, मन्तरहरुबाट उपलब्ध भएका उपायहरुले बिरामी र उपचार गरिदिने दुबैलार्इ गलत प्रभावित भइरहेका हुन्छन् । फरक केवल यत्ति हो कि यस खतराका बारेमा ती लामा, झाँक्री, पण्डित, पुजारी, जन्तर, मन्तर गरिदिनेहरु आफैलाई थाहा नभएकाे हुन सक्दछन् । यिनै अल्प ज्ञानी गुरु, पुजारी, पण्डित, झाँक्रीहरुका पछि लाग्दै आँसुमा जीवन बिताइ रहेको थुप्रै मानिसहरु देखेको छु ।
यी आवश्यक अध्ययनहरु कहाँ गएर गर्न सकिन्छ ?
यो किताब सुरुदेखि अन्त्यसम्म ध्यान दिएर पटकपटक पढेर यसले भन्न खोजेको भाव बुझ्न सकेमा ती अदृश्य संसारका जीव र तिनीहरुका गुण अवगुणहरुका बारेमा आवश्यक परिचय र उपायहरु बुझ्न पर्याप्त हुनेछ वा पर्याप्त हुने गरी समावेश भएका छन् । ती प्राप्त ज्ञान र भावले मानिस पूर्ण रुपमा यस्ता त्रासका समस्याबाट उम्कन सक्नेछन् । तर यस्ता समस्याबाट उम्कन, बच्ने इच्छा भएकाहरुलाई यो किताबले अवश्य सहयोग पुर्याउने छ । तर धेरै मानिसहरु अल्प ज्ञानमानै बढी विश्वास राख्न चाहनेहरु हुन्छन् । यस्ता समस्याबाट उम्कन नचाहने, पटकपटक यिनै कुराहरु कोट्याइ राख्ने, अल्प ज्ञानभएकाहरुलाई सायद यस पुस्तकले पनि आवश्यक सहयोग पुर्याउन नसक्ला र उनीहरु र उनीहरुका परिवारका सदस्य, नजिककाहरु अझै समस्यामा अल्झिरहने, विभिन्न समस्याहरु भोगिरहने, अश्वस्थ वा अकाल मृत्युको समस्याबाट गुज्रन पर्ने अवस्थाहरु आउन सक्नेछन् । यिनै कुराहरु पछिका अन्य पाठहरुमा वर्णन गरिएको छ ।
मुटुको Implantation गर्दा के हुन्छ ? पहिला मुटुमा बसेको लिँग शरीरले म र मेरो शरीर भनेर आउने त हैन ?
त्यस्तो हुँदैन । मुटु एक ग्रन्थि मात्रै हो । लिँग शरीर बस्ने घर मात्रै हो । भत्कन लागेको घर, यता चुहिने, उता चुहिने, झ्याल ढोका राम्ररी नलाग्ने, पानी हुरीवतास आउदा भत्केर पुरीएर मरिन्छ कि भनेर डर भइरहेको बेलामा पुरानो घरको ठाउँमा नयाँ घर ल्याइदिए, बनाइदिए लिँग शरीरको त भलो नै हुन्छ । त्यसैगरी लिँग शरीर बसिरहेकाे घर भत्केर पुरानाे भएकाे बेलामा नयाँ घर बनाइदिए लिँग शरीर अवश्य खुसि हुनेछ । घरका पुराना साहु पनि यसाे कहिले कहीँ साेध पुछ गर्न अाउन सक्छन् हाेला ? तर अधिकार जमाएर मेराे शरीर हाे भन्ने पूर्ण अधिकार र क्षमता हुँदैन हाेला जस्ताे लाग्छ ?